MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardGetting Started faqs mm - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
1.MPT SIM Card တစ်ခုရဲ့စျေးနှုန်းကဘယ်လောက်လဲ။
MPT SIM Card တစ်ခုလျှင် ၁၅ဝဝကျပ်နှင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
2. MPT SIM Card စတင်သုံးစွဲပါက ဘယ်လိုလက်ဆောင်တွေရရှိနိုင်မှာပါလဲ။
SIM Card စတင်အသုံးပြုပြီး (၇)ရက်အတွင်း ပထမဆုံးတစ်ကြိမ် ဖုန်းငွေဖြည့်ပါက အပိုလက်ဆောင်များကို အောက်ပါအတိုင်းရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ငွေဖြည့်ပမာဏ [ကျပ်] Main Balance [ကျပ်] ပထမဆုံးငွေဖြည့်လက်ဆောင် သက်တမ်း မှတ်ချက်
500 ကျပ် ငွေဖြည့်ပမာဏ 500 ကျပ် 2GB + ရက်ပေါင်း ၉၀ ညဘက် Facebook အခမဲ့အသုံးပြုခွင့် ၆၀ ရက် အကန့်အသတ်မရှိ Facebook App/ Browser မှ Facebook (ပြင်ပ links များမပါဝင်) နှင့် Messenger (Voice, Video calls များမပါဝင်) ကို ည၁၁နာရီမှ မနက်၇နာရီအထိ အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
1000 ကျပ် နှင့်အထက် ငွေဖြည့်ပမာဏ 500Ks + ရက်ပေါင်း ၉၀ ညဘက် Facebook အခမဲ့အသုံးပြုခွင့်
1099 ကျပ် – 2GB + 1000Ks + ရက်ပေါင်း ၉၀ ညဘက် Facebook အခမဲ့အသုံးပြုခွင့်
3. SIM Card ဖုန်းငွေဖြည့်အပိုလက်ဆောင်ကို ဘယ်သူတွေရရှိနိုင်မှာလဲ။
MPT SIM Card အသစ် GSM/WCDMA (Prepaid စနစ်) အသုံးပြုသူများသည် SIM Card စတင်အသုံးပြုပြီး (၇)ရက်အတွင်း ပထမဆုံးတစ်ကြိမ် ဖုန်းငွေဖြည့်ပါက ည ၁၁နာရီမှ မနက် ၇နာရီအထိ အခမဲ့ Facebook အသုံးပြုခွင့် အပါအဝင် ဖုန်းငွေဖြည့်အပိုလက်ဆောင်ကိုချက်ချင်း ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
4. SIM Card ဖုန်းငွေဖြည့်အပိုလက်ဆောင်ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ။
ဖုန်းငွေဖြည့်အပိုလက်ဆောင်ကို မည်သည့်ကွန်ယက် (မည်သည့် အော်ပရေတာ)ကိုမဆို ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းနှင့် စာတိုပေးပို့ခြင်း၊ အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းတို့အတွက် သုံးသလောက်ပေးနှုန်းထားများ အတိုင်း ရက်ပေါင်း(၆၀) အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ရရှိထားသောဒေတာလက်ဆောင်(GB) ကို အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအားလုံးအတွက် ရက်ပေါင်း(၆၀) အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ည ၁၁နာရီမှမနက် ၇နာရီအထိ Facebook App/ Browser မှ Facebook နှင့် Messenger အခမဲ့ အသုံးပြုခွင့်ကို ရက်ပေါင်း(၉၀)အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ငွေဖြည့်ပမာဏ (Main Balance) ကို မည်သည့်ဖုန်းဘေလ်အသုံးပြုမှုအတွက်မဆို ငွေဖြည့်သွင်းသည့်ရက်မှ (၃၆၅) ရက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
5. ပထမဆုံးတစ်ကြိမ် ၅၀၀ကျပ်ငွေဖြည့်သွင်းထားပါတယ်။ မည်သည့်အပိုလက်ဆောင်ရရှိမှာလဲ။
ပထမဆုံးတစ်ကြိမ် ၅၀၀ကျပ် ငွေဖြည့်သွင်းပါက ငွေဖြည့်ပမာဏ ၅၀၀ ကျပ်ကို (၃၆၅) ရက် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ပထမဆုံးငွေဖြည့်လက်ဆောင်အနေဖြင့် အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအားလုံးအတွက် 2GB ရက်ပေါင်း (၆၀) နှင့် ည ၁၁နာရီမှ မနက် ၇နာရီအထိ အခမဲ့ Facebook အသုံးပြုခွင့် ရက်ပေါင်း (၉၀) ရရှိအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
6. MPT SIM Card အသစ်ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စတင်အသုံးပြုပြီးနောက်(၇)ရက်အတွင်း ပထမဆုံးတစ်ကြိမ် ဖုန်းငွေဖြည့်တဲ့အခါမှာတော့ မည်သည့်အပိုလက်ဆောင်မှမရရှိပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ? ဘယ်လို စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသလဲ?
MPT SIM Card အသစ် စတင်အသုံးပြုသူများသည် SIM Card ကို Activate ပြုလုပ်ပြီးမှသာ ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်းဖြင့် အပိုလက်ဆောင်ကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
• SIM Card ကို Activate ပြုလုပ်ရန် – (*124#) ကို ရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုခြင်း(သို့မဟုတ်) ဖုန်းတစ်ကြိမ်ခေါ်ဆိုခြင်း။
• 106 (Call Center) သို့ ဖုန်းခေါ်ဆို၍လည်း စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
7. ဆင်းကတ်အသစ်အတွက် ပထမဆုံးအကြိမ်ငွေဖြည့်ခြင်းဖြင့် ပထမဆုံးငွေဖြည့်လက်ဆောင်အပြင် အခြားငွေဖြည့်လက်ဆောင်များပါ ရရှိမှာပါလား။
မရရှိနိုင်ပါ။ ဆင်းကတ်အသစ်ဝယ်ယူ၍ စတင်အသုံးပြုပြီးနောက်(၇)ရက်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်ငွေဖြည့်ခြင်းဖြင့် ပထမဆုံးငွေဖြည့်လက်ဆောင်ကိုသာ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ စတင်အသုံးပြုပြီးနောက်(၇)ရက်ကျော်လွန်ပြီး ပထမဆုံးအကြိမ်ငွေဖြည့်ပါက ပထမဆုံးငွေဖြည့်လက်ဆောင်ကို ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ဘဲ အခြားငွေဖြည့်လက်ဆောင်များကို သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း ခံစားခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
8. MPT ဆင်းကဒ် ၀ယ်ဖို့ မည်သည့်အထောက်အထားလိုအပ်ပါသလဲ?
MPT ဆင်းကဒ်များကို မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ဖုန်းဟန်းဆက် အရောင်းဆိုင်များ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအရောင်း ဆိုင်များ၊ ကုန်စုံဆိုင်နှင့်စတိုးဆိုင်များ အစရှိသည့်နေရာများတွင်လွယ်ကူစွာဝယ်ယူ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ရာတွင် အနည်းဆုံး နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် သို့မဟုတ် အခြားသောစိစစ်ရေး ကတ်၏ မိတ္တူ (အကယ်၍ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက နိုင်ငံကူးလက်မှတ်) တို့ကို ယူဆောင်လာရန် လိုအပ်ပါသည်။
9. APN setting ကိုဘယ်လိုရယူနိုင်မလဲ?
အင်တာနက် အသုံးပြုရန် APN ချိန်ညှိခြင်းရွှေစကား၊ ရှယ်ပြော(သို့) ဆွေသဟာကို ရယူခြင်းဖြင့် မြန်ဆန်သော အင်တာနက်ကို အလိုအလျှောက်ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
အလိုအလျှောက် APN Setting ဝန်ဆောင်မှုသည် GSM/WCDMAဖုန်းများအတွက်သာဖြစ်ပြီးCDMA
အချို့သော Handset များတွင် Auto APN settingအား အလိုအလျောက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် APN setting ကို ကိုယ်တိုင်ရိုက်နှိပ်ရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Andriod ဖုန်းအသုံးပြုသူများ : Mobile Network > Access Point Name>Name – mptnet, APN – mptnet
iOS ဖုန်းအသုံးပြုသူများ : Setting > Cellular > Cellular Data Network > Name – mptnet, APN mptnet
အင်တာနက်အားအသုံးပြုလိုခြင်းမရှိပါက mptnet အားပယ်ဖျက်ခြင်းဖြင့် APN settingအား ရပ်တန့်နိုင်ပါသည်။
အသုံးပြုသူအနေဖြင့် မည်ကဲ့သို့ပြုလုပ်ရမည် ကိုမသိရှိပါက “ Call Center 106” အားခေါ်ဆို မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
10. “Dear MPT customer, your handset is not configurable, remotely. Please ensure your APN is set to “mptnet”. Call 106 for assistance”. ဆိုတဲ့စာတိုကို လက်ခံရရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီစာကဘာလဲ။
အချို့သော မိုဘိုင်းဟန်းဆက်များမှာ APN Setting ကို အလိုလျှောက်ရယူနိုင်ခြင်းမရနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် APN Setting ကို ကိုယ်တိုင် ရိုက်နှိပ်ပြီး ရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသူဟာ APN Setting မည်သို့ ချိန်ရမည်ကို မသိရှိပါက ဖုန်းနံပါတ် ၁၀၆သို့ ခေါ်ဆိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
11. “Thank you, your request is being processed. If you receive internet settings on your phone, please accept. If asked foraPIN, please use 3333.” ဆိုတဲ့စာတိုကို လက်ခံရရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီစာကဘာလဲ။
အဆိုပါ စာတိုကို နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် APN setting ကိုအလိုလျှောက်ရယူနိုင်ကြောင်း အသိပေးသည့် စာတိုဖြစ်ပါတယ်။
11. Internet Setting ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်သူတွေက အကျုံးဝင်ပါသလဲ?
MPT GSM/WCDMA မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသူအားလုံးအကျုံးဝင်ပါတယ်။
12. အင်တာနက်ကို မသုံးချင်တော့ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
APN Setting ထဲမှ “mptnet” ကို ဖျက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
13. ယခုရရှိမည့် Internet setting ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဝန်ဆောင်ခပေးရမှာလား?